तातोपानी नाका बन्दले चीनसँगको सम्बन्धमै असर परेको छ - Karobar National Economic Daily
तातोपानी नाका बन्दले चीनसँगको सम्बन्धमै असर परेको छ
query_builderJanuary 6, 2017 10:13 AM supervisor_account visibility972
भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका सञ्चालन नहुँदा देशले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ । दैनिक डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने नाका बन्द हुँदा नेपाल–चीनबीच व्यापार गर्ने अधिकांश व्यवसायी विस्थापित बन्न पुगे । नाकामै रहेर भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू मर्कामा परेका छन् ।
उता केरुङ नाकाबाट पनि व्यापार गर्न सहज नभएको अवस्था छ । जुरे पहिरो, भूकम्प अनि भोटेकोसीको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको आर्थिक अवस्थालाई नगाँजेको हैन । यी विपत्तिले सिन्धुपाल्चोकका व्यवसायीलाई आर्थिक उचाइमा पुग्न केही बाधा सिर्जना गरे ।
समस्या समाधानका लागि अनेकौं प्रयास भए । कति सफल भए । कति अड्किए । कृषिबाटै पनि सिन्धुपाल्चोक अर्थतन्त्रमा अब्बल छ । अनेकौं समस्याका बाबजुद पनि जिल्ला आफैंमा आत्मनिर्भर पनि छ ।
यसको विकासका लागि भएका प्रयास, तातोपानी नाका सञ्चालन अनि व्यवसायीको हितका लागि गरिएका प्रयासलगायतका विषयमा केन्द्रित रही सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमलकुमार श्रेष्ठसँग कारोबारकर्मी किशोर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीः
सिन्धुपाल्चोकको पहिचान झल्काउने मुख्य व्यवसाय के हो ? यसको अवस्था के छ ?
सिन्धुपाल्चोकको पहिचान झल्काउने मुख्य व्यवसाय भनेको पर्यटन र कृषि नै हो । जिल्लाका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न धार्मिक स्थल र कुण्ड छन्, यस्ता ठाउँमा पर्यटकलाई घुमाउने व्यवस्था मिलाउन सके र विभिन्न ठाउँमा होमस्टेको व्यवस्था गर्न सके रोजगारीको पनि सिर्जना हुनेछ । त्यसका साथै होटल व्यवसाय पनि फस्टाउने सम्भावना छ ।
भैरवकुण्ड, पाँचपोखरी, ऐतिहासिक किल्ला दुगुनागढी लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता पर्यटनको सम्भावना बोकेका धेरै सम्पदा जिल्लामा छन् ।
हालै मात्रै लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अमेरिकको चर्चित पत्रिका न्युयोर्क टाइम्सले घुम्नैपर्ने विश्वका प्रमुख स्थलमा सूचीकृत गरेको छ । जुन सूचीमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
पर्यटकीय क्षेत्रका लागि सिन्धुपाल्चोकमा अनगिन्ति स्थान भए पनि प्रचारको अभावले ओझेलमा छन् । यसको प्रबद्र्धनमा सबै एकजुट हुनु अहिलेको आवश्यकता हो किनभने पर्यटनमार्फत पनि जिल्लाको आर्थिक उचाई धेरैमाथि पुग्न सक्छ ।
जिल्लाको अर्काे प्रमुख पहिचान झल्काउने व्यवसाय कृषि नै हो । सिन्धुमा उत्पादन गरिएका विभिन्न कृषिउपज विदेश निर्यात हुने गरेका छन् । यहाँ उत्पादित कफी विगत ५/६ वर्षदेखि जापान, कोरिया निर्यात हुँदै आएको छ ।
जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेको कफी बोटमै बिक्री हुन्छ । अलैंची पनि पछिल्लो समय भारत, चीनलगायत विभिन्न देशमा पुग्ने गरेको छ । यसबाट पनि यहाँका किसानको आम्दानी सन्तोषजनक पाइएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक नेपालमै यस्तो नमुना जिल्ला हो जहाँ एकै दिनको पैदलबाट पनि हिमाल, पहाड र तराईको हावापानीको महसुुस गर्न सकिन्छ । त्यसैले पनि यहाँ जुनसुकै खेती गर्न सकिन्छ ।
मुलुककै पहिलो ब्रान्ड नाम दिएको आलु पनि यही जिल्लाको उत्पादन हो । जिल्लाका किसानहरूले उत्पादन गरेको विभिन्न तरकारी, फलफूल राजधानी भित्रिरहेकाले कृषि व्यवसाय पनि जिल्लाको पहिचान हो ।
भूकम्पपछि तातोपानी नाका पूर्णरूपमा बन्द भएको छ । यसको कस्तो असर परेको छ ?
भूकम्पपछि तातोपानी नाका पूर्णरूपमा बन्द हुँदा धेरै नै ठूलो असर परेको छ । सिन्धुपाल्चोकका धेरै मानिस यही नाकाबाट व्यापार व्यवसाय गरेर आफ्नो जिविकोपार्जन गर्ने गरेका थिए । अहिले उनीहरू विस्थापित नै भएका छन् । पेसा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ ।
केरुङ नाकाबाट व्यवसाय गर्न सहज अवस्था छैन । भूकम्पपछि नाका बन्द हुँदा धेरै व्यवसायी आफैं ऋणको मारमा परेका छन् । भन्सार भइसकेको आफ्नो सामान ल्याउन नपाउँदा एकै दिनमा पनि लाखौं ब्याज व्यवसायीले तिर्नुपरेको अवस्था भएकै कारणले पनि व्यवसायीको आर्थिक जीवनस्तर खस्कियो ।
वर्षौंसम्म व्यापार गर्न सक्ने अवस्था भएन । खासा यार्डसम्म आइपुगेका सामग्री नेपाल भित्र्याउन नसक्दा बजार पनि प्रभावित भयो । अधिकांश सामान बिग्रिए ।
नाकामा रहेर व्यापार गर्ने साना व्यवसायी पनि मर्कामा परे । भारी बोकेरै जीवन गुजारा गर्ने साथीहरूको उठीबास नै भयोभन्दा फरक नपर्ला । आम्दानीको एकमात्रै स्रोत गुमेपछि धेरै स्थानीयवासीसमेत विस्थापित बने ।
नाका बन्द हुँदा राज्यलाई समेत निकै नोक्सानी परेको छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयले मात्रै दैनिक डेढ करोडको हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्ने गरेको थियो । त्यो गुमेको छ । तातोपानी, कोदारी, लिपिङ बजारमा हुने चहलपहल, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट हुने होटलका व्यवसाय एकै चोटी शून्यमा झरेको छ ।
अरनिको राजमार्गमा हुने व्यावसायिक प्रगति जिरोमा पुग्यो । अझ प्रमुख असर त नेपाल चीनबीचको सामाजिक, आर्थिक तथा व्यवहारिक सम्बन्धमा परेको देखिन्छ ।
नाका सञ्चालन गर्न उद्योग वाणिज्य संघले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ?
तातोपानी नाका सञ्चालन गर्नका लागि संघले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । छिटोभन्दा छिटो नाका सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम गरी छलफल गरिरहेका छौं र अहिले पनि सम्बन्धित निकायहरूमा पहल गरिरहेका छौं ।
नाका सञ्चालन नहुँदा कुन–कुन क्षेत्र धरासायी भएको छ ?
नाका सञ्चालन नहुँदा धेरै जसो क्षेत्र धरासायी बनेका छन् । व्यापार, व्यवसायदेखि जिल्लाको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने विभिन्न क्षेत्र मर्कामा परेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्र पनि त्यसको सिकार बन्यो । विशेषगरी अरनिको राजमार्गको दोलालघाटदेखि सीमासम्मका साना तथा ठूला व्यवसायी मारमा परे ।
मासिक करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुने क्षेत्र एकैचोटी शून्यमा आउनु भनेको चानचुने हैन ।
तातोपानी नाका सिन्धुपाल्चोकका व्यवसायीले मात्र नभएर नेपालभरका व्यवसायीले व्यापार गरिएको नाका हो र नाका सञ्चालनमा नहुँदा हजारौं ट्रक, कन्टेनर, व्यवसायी, होटल व्यवसायी, दैनिक व्यवसाय गरेर बिहान बेलुका छाक टार्ने चार सयभन्दा बढी व्यवसायी र लोडर संघका चार सयभन्दा बढी मजदुर मर्कामा परेका छन् । त्यसैगरी लिपिङ, तातोपानी, बाह्रबिसे, खाडीचौर, चौतारा, मेलम्ची बजारमा दैनिक लाखौंको व्यापारसमेत अहिले ठप्प छ ।
संघका तर्फबाट साना लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर कृषि व्यवसाय गर्नेका लागि बिनाधितो पचास हजार रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने जानकारी गराएका थियौं । अहिलेसम्म संघमा यो माग भएको छैन र अन्य साना व्यवसायीको हकमा समय–समयमा हुने बिलको समस्या र बजार व्यवस्थापनको सम्बन्धमा पहल गरेको छ ।
साना लगानीकर्ताको व्यापार स्तरोन्नतिका लागि संघ सकारात्मक छ । विभिन्न खाले सहयोग गरेर उनीहरूलाई अब्बल व्यापारी बनाउने हाम्रो अभियान पनि छ । यसका लागि साना लगानीकर्ता साथीहरूले संघप्रति ‘किप इन टच’मा रहे संघलाई निकै सजिलो हुन्छ । उद्योग वाणिज्य संघबाट हुने कार्य सम्पादनमा साना र ठूला गरी सबै खाले व्यवासायीको उत्तिकै कर्तव्य, जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरेका छौं ।
साना उद्योगको विकास हुन थाल्दै गर्दा २०७२ सालको भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई धेरै नै क्षति गरायो । उद्योगको विकासले गति लिइसकेको अवस्थामा फेरि शून्यमा झरेकाले नै यतिबेला विकास नदेखिएको हो । निर्माणाधीन साना उद्योग पनि निकै क्षति भयो ।
अब उद्योग सञ्चालनका लागि सबै क्षेत्रबाट पहलको सुरुवात गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक छ र त्यसपछि केही उद्योग सञ्चालनमा आउने सम्भावना छ । सुरु हुन लागेका उद्योगलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे संघमा छलफल, बहस सुरु भइसकेको छ ।
राजधानीसँग जोडिएको जिल्ला भएर पनि औद्योगिक क्षेत्रमा किन लगानी भित्रन सकेन ?
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जलस्रोतको धनी हो र यहाँ जति पनि जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनको क्रममा छन्, समय समयमा बन्द–हड्ताल भई रहने, त्यसैगरी क्रसर व्यवसायीहरूले पनि समय–समयमा विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने भएकाले लगानी भित्रन सकेको छैन ।
व्यवसायीहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकेको तथ्यलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नु नै जिल्लामा औद्योगिक लगानी नभित्रिनुको मुख्य कारण हो भन्ने लाग्छ ।
कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको आवाज उठ्ने गरेको छ नि !
संघको पहिलो प्राथमिकता भनेकै कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । हामीकहाँ अलैंची, कफि, चिया, ट्राउट माछा र अन्य कृषिजन्य वस्तु उत्पादन हुन्छन् । अझै भन्नैपर्दा कृषिबाटै जिल्लाको आर्थिक अवस्था धान्न सक्ने क्षमता छ ।
कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायीका समस्यालाई समाधान गर्नु नै संघको कर्तव्य पनि हो । व्यवसायीलाई कहाँ कस्ता चुनौती छन्, जिल्लामा सम्भावना के छन्, अनि व्यवसायका लागि के–केको आवश्यक छ भन्ने कुरा संघमा कुरा आउनु जरुरी छ ।
विभिन्नखाले समस्या समाधानका लागि र संघका तर्फबाट के गर्दा व्यवसायीलाई सहज हुुन्छ त्यो कुराहरू संघमा ल्याउनुस् भनरे हामीले पटक–पटक भनेका छौं ।
भन्नैपर्दा कोही पनि कृषक व्यवसायहरूले आधिकारिक कुरा संघमा ल्याएका छैनन् । अझै पनि म सम्पूर्ण कृषक व्यवसायीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यहाँहरूका समस्या लिएर संघमा आउनुस् त्यसको छलफल गरी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।
जिल्लामा रेमिट्यान्समार्फत ठूलो रकम भित्रने गरेको छ, त्यसलाई व्यवसायमा लगाउन सके रोजगारी सिर्जना गराउन सकिन्थ्यो । व्यक्तिको आम्दानी पनि बढथ्यो त्यसमा संघको योजना के छ ?
जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू धेरै हुनुहुन्छ । त्यसैको अनुपातमा रेमिट्यान्स पनि भित्रिएको छ । तर, संघसँग रेमिट्यान्स भित्रिएको तथ्यांक छैन । हामीले लिन सकेका पनि छैनौं । यो बडो चुनौतीपूर्ण काम हो । र, पनि हामीले धेरै रेमिट भित्र्ने गाउँमा सबै एकजुट भएर व्यवसायमा लगानी गर्नुु भनेर सुझाएका छौं ।
जिल्लाको हेलम्बु, किउलका बासिन्दाको पहुँच युरोप, अमेरिकामा छ । त्यहाँका गाउँवासी अहिले पर्यटक प्रबद्र्धनका लागि पर्नुभएको पनि छ । गाउँमै करोडौंको लगानीमा रिसोर्टहरू स्थापना भएका छन् । त्यो सबै रेमिट्यान्सकै रकमले सम्भव भएको हो । यसरी हेर्दा केही रोजगारीको वातावरण रेमिट्यान्सले पनि सिर्जना गरेको छ । तर, अपेक्षाकृत भने यो होइन ।
जिल्लाको सबै गाउँबाट विदेशमा जानेको संख्या अहिले झनै बढ्दो रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ । यसले जिल्लामा अझै रेमिट्यान्स बढ्ने संकेत गरेको छ ।
यसलाई सही काममा सदुपयोग गर्रा जिल्लामा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरी आफैं आत्मनिर्भर बनाउन संघले विभिन्न किसिमका योजनालाई एजेण्डा बनाएको छ ।
रेमिट्यान्सलाई सदुपयोग गरी आर्थिक समृद्धिका लागि हरेक गाविसमा सचिवसँग समन्वय गरी व्यवसायमा लगानी गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम लैजाने, आयमूलक सीपको प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता योजना हामीले लिएका छौं ।
व्यवसायीको हितका लागि तपाईंको कार्यकालमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ?
व्यवसायीको हितका लागि सिन्धुपाल्चोकका तीनवटै क्षेत्रमा पटक–पटक व्यापारीहरूसँग छलफल भएको छ । व्यवसायीलाई आएका समस्या र तिनका समाधानका उपाय पहिल्याइएको पनि छ । हालसम्म भएका प्रगति र अबको सम्भावनाका बारेमासमेत अन्तरक्रिया भएको छ । यस्ता कार्यक्रमले व्यवसायीलाई अगाडि बढ्न सहज हुने देखिएको पनि छ ।
सीमा क्षेत्र लिपिङ, तातोपानी, बाह्रबिसे, खाडीचौर, चौतारा, मेलम्ची र अन्य ठाउँका व्यवसायीलाई संघले समय समयमा बैठक राख्ने गरेको हो । विशेषगरी कृषि र पर्यटक व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सिन्धुपाल्चोकका तीनवटै क्षेत्रमा होमस्टेको व्यवस्था गरी यसको सुरुवात संघकै तर्फबाट गर्ने योजना बनाएका थियौं । भूकम्पका कारण यसलाई हामीले निरन्तरता भने दिन सकेका छैनौं ।
मेरो कार्यकालमा सिन्धुवासीले धेरै विपत्तिको सामना गर्नुपरेको छ । जुरे पहिरो, भूकम्प अनि भोटेकोसी बाढीले जिल्लावासीलाई सधंै सन्त्रासमा बाँच्न बाध्य बनायो । जुरे पहिरोपीडितलाई संघले १ करोड २० लाखको हाराहारीमा नगद वितरण गरेको मेरै कार्यकालमा हो । त्यसपछि भूकम्पपीडितलाई विभिन्न जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघले संकलन गरेर पठाएको रकम हामीले राहत वितरण गरेका छौं ।
शाखा कार्यालय विस्तार पनि तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । मेलम्ची शाखाको भवन बनिसकेको छ । चौतारामा पनि सुरु हुने क्रम छ । अहिले संघ भौतिक निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ अघि बढिरहेको छ ।
जिल्लाको आर्थिक उन्नतिका लागि राजनीतिक दलको कत्तिको सहयोग छ ?
राजनीति विकासको मूल आधार हो । समृद्ध सिन्धुपाल्चोक निर्माणका लागि राजनीति दल जिल्लामा सक्रिय छन् । व्यवसायीको हितका लागि दल सकारात्मक छन् । व्यवसायीसँगको समन्वयमा दलहरू आर्थिक क्रान्तिमा होमिएका छन् । जिल्लाको आर्थिक उन्नतिमा व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले दलको सहयोगलाई हामीले योगदानकै रुपमा लिएका छौं ।
राजनीतिक दलहरूकै अगुवाइमा आयोजनाहरू बन्द हुन्छन्, ताला लगाइन्छ । तोडफोड गरिन्छ । यस्तो किन हुनेगर्छ ? यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि के गर्नुपर्ला ?
समय–समयमा हुने बन्दले आयोजनालाई धेरै असर पारेको छ । आयोजना निर्माणबाट स्थानीयले पाउने सुविधा वृद्धि, मुआब्जालगायतका विषयमा विवाद आएपछि आयोजनामा ताला लगाउनेजस्ता कार्य हुँदै आएको हामीले स्वीकार्नुपर्छ ।
मुख्य गरी सिन्धुपाल्चोकमा अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई कुनै पनि समयमा बन्द हड्ताल नगरी परेको समस्यालाई सम्बन्धित कम्पनीसँग बसेर छलफल गर्ने र हामीले राजनीतिक दलले पनि सहयोग गर्ने भनेर हामीले भनेका छौं ।
समस्याको समाधानका लागि बन्द–हड्ताल हैन, तत्कालै राजनीतिक दल, सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालकहरू र निजी संघ–संस्थाका प्रतिनिधि बसेर एउटा नीति नै बनाएर अघि बढ्नका लागी राजनीतिक दलहरूलाई अनुरोध गरेका छौं ।
यसैगरी हरेक क्षेत्रमा सबै निकाय मिलेर अघि बढ्न आवश्यक छ । अब समृद्ध सिन्धुपाल्चोकको नारा लिएर अघि बढ्नका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्छ । हामी निजी क्षेत्र सबै निकायसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न तयार छौं ।
राजस्व भूकम्प तातोपानी नाका सिन्धुपाल्चोक